Taleefanka gacanta oo bilaash ah - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Raadi Qorshe > Qorshaha Caafimaadka Apple > Qorshee Faa'iidooyinka > Taleefanka gacanta oo bilaash ah
Taleefanka gacanta oo bilaash ah
Ku xidhnow qorshaha mobilada bilaashka ah.
Taleefanka gacanta oo fudud ayaa dunida isbeddel ka samayn kara. Adiga oo ah Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) xubin Apple Health ah, waxaad heli kartaa a qorshe taleefan leh xog bille ah - adiga oo aan qiimo kugu fadhiyin!
Sida loo helo taleefankaaga gacanta oo bilaash ah
Bixiyeyaashani waxay siiyaan qorshayaal taleefan gacmeed bilaash ah xubnaha CHPW Apple Health iyada oo loo marayo federaalka dowladda Barnaamijka nolosha. Dalbo qorshahaaga taleefanka gacanta oo bilaash ah adoo booqanaya boggooda ama wicitaan siinaya.
Taleefan casri ah oo bilaash ah, 350 daqiiqo oo cod bilaash ah bil kasta, qoraallo aan xadidnayn iyo 3GB xog bilaash ah bil kasta.
Hayso taleefankaaga oo hel 350 daqiiqo oo cod ah iyo 3GB xog bilaash ah bil kasta.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Diseembar 30, 2020